Afar arrimood ka ogow gabadhii Muqdisho lagu afduubay - BBC News Somali
Afar arrimood ka ogow gabadhii Muqdisho lagu afduubay
4 Maajo 2018
Lahaanshaha sawirka ICRC
Image caption Sonja Nientiet waxaa afduubtay ilaaladeedii
Ilaalo u shaqaynaysay laanqayrta cas ee caalamiga ayaa ku lug yeelatay afduubka kalkaaliso jarmal ah oo hay'adda uga shaqaynaysay Muqdisho sida ay dawladda Soomaaliya sheegtay.
Kalkaalisada oo magaceeda lagu sheegay Sonja Nientiet waxaa 8:00 fiidnimo ee Arbacadii laga afduubtay xarunta ICRC, markii ay rag hubaysan oo la garan waayey soo galeen dhismaha.
Afhayeen u hadlay wasaaradda amniga, C/casiis Cali Ibraahim, wuxuu sheegay in ilaalada laanqayrta cas ay ku lug lahaayeen, ka dib markii shaqaalaha maxalliga ay sheegeen in ragga dableyda ah ay si fudud Nientiet ugala baxeen dhinaca dambe, oo ay ku riteen gaari sugayey.
Haddaba wxaan halkan idin kugu soo gudbineynaa afar arrimood oo ku saabsan afduubkaasi.
1. Afduubkii ugu horreeyey sanado badan
Markii ugu dambaysay ee dad u dhashay waddamada galbeedka u dhashay lagu afduubto waxay ahayd 2009, markaasoo laba nin oo u dhashay waddanka Faransiiska lagala baxay Hotel ku yaalla bartamaha magaalada.
Waxay dawladda Soomaaliya ka caawinayeen dhinaca amniga iyo ciidamada, waxayna markii dambe gacanta u galeen Al Shabaab.
Dawladda Soomaaliya: waan ognahay cidda afduubtay shaqaalaha ICRC
Gabadh Laanqayrta Cas u shaqaynaysay oo Muqdisho lagu afduubtay
2. ICRC xalane xarun uma ahan
Hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Muqdisho ama xafiisyada ku leh, waxay intooda badan ama gabigood ka hawl galaan gudaha xerada Xalane iyo garoonka dayaaradaha ee Aadan Cadde.
Hay'adda Laanqayrta cas kama mid aha hay'adahaas, waxayna xafiis ku leeyihiin magaalada gudaheeda.
Shaqaalaha maxalliga iyo kuwa caalamiga waxay labadaba ku shaqeeyaan xafiiskaas, walow tirada shaqaalaha ajnabiga ah ee xafiiska jooga ay aad uga yar yihiin kuwa maxalliga.
Image caption Dowladdu waxay aaminsan tahay in mid ka mid ah ilaalada xarunta ICRC ee Muqdisho uu ka dambeeyay afduubkan
3. Sonja Nientiet waxaa afduubtay ilaaladeeda.
ICRC iyo dawladda Soomaaliyaba waxay xaqiijiyeen in ilaalaada hay'adda ay ka dambeeyeen afduubka gabadhaas kalkaalisada ah.
Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in ay xabsiga dhigtay ilaaladii shaqada ku jirtay xilligii uu afduubku dhacay, ayna wadaan baaritaan iyo qorshe ay doonayaan inay ku soo furtaan kalkaalisada.
4. Weerarkii labaad ee shaqaale ICRC lagu qaaday dhawaan
Afduubka gabadhan kalkaalisada ah ayaa noqonaya weerarkii labaad ee loo gaysto shaqaale u shaqeeya laanqayrta cas .
Cabdulxaafid Yuusuf Ibraahim oo ahaa muwaadin Soomaali ah oo mudo 5 bilood oo kaliya ah u shaqaynayey hay'adda ayaa 25 Maarso geeriyooday, ka dib markii qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu a baxayey xafiiska ICRC.